Mgbanwe Dijitalụ na Mkpa nke Ijikọ Ọhụhụ Ebumnuche | Martech Zone
Otu n'ime ọla ọcha ole na ole nke nsogbu COVID-19 maka ụlọ ọrụ abụrụla ngwangwa dị mkpa nke mgbanwe dijitalụ, nwetara na 2020 site na 65% nke ụlọ ọrụ dịka Nwokeji Ọ na-aga n'ihu n'ihu n'ihi na azụmaahịa n'akụkụ ụwa niile enyerela ụzọ ha aka.
Dika oria ojoo a emeela ka otutu ndi mmadu ghara izere mmekorita ihu na ulo ahia na ulo oru, ndi otu di iche iche na-aza ndi ahia otutu oru dijital. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ B2B nke na-enweghị ụzọ isi ree ngwaahịa ozugbo na-arụ ọrụ oge iji wepụta ikike ọhụrụ e-commerce, ma n'otu oge na-akwado ndị isi na-arụ ọrụ site na ụlọ. N'ihi ya, itinye ego na teknụzụ ọhụụ abụrụla nke na-eme ka ihe ndị ahịa na-atụ anya.
Ma na-agba ọsọ itinye ego na teknụzụ naanị n'ihi na ọ bụ ihe a ga-eme adịkarịghị ezi atụmatụ nke ime ihe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụta na teknụzụ dị oke ọnụ, na-eche na enwere ike ịhazi ya ngwa ngwa ka ọ dabaa ụdị azụmaahịa a kapịrị ọnụ, ndị na-ege ntị na ndị ahịa, na ebumnuche ndị ahịa, naanị na-emechu ihu n'okporo ụzọ.
A ga-enwerịrị atụmatụ. Mana n'ime ọnọdụ azụmaahịa a na-ejighị n'aka, ọ dịkwa mkpa ịdị ngwa. Kedu otu nzukọ nwere ike isi rụzuo ha abụọ?
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa, dịka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu nke dijitalụ, bụ njikọta nke usoro ọhụụ siri ike gafee IT na ire ahịa na anya maka ogo ntozu dijitalụ. Na-enweghị ya nzukọ ize ndụ belata nsonaazụ, ọtụtụ teknụzụ teknụzụ, na ebumnuche azụmaahịa efu. Ma enwere echiche na-ezighi ezi na ịbụ usoro pụtara ime ka usoro a kwụsị. Nke ahụ abụghị ikpe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ amalitela ịmaliteghachi, ọ gaghị egbu oge ịme mgbanwe iji mezuo ebumnuche bụ isi.
Mkpa Ule-Mụta Ihe
Zọ kachasị mma iji mejupụta ọhụụ dị iche iche n'ime mgbanwe dijitalụ bụ nnwale nnwale na mmụta. Ọtụtụ mgbe ọhụụ na-amalite site na ndu ma na-aga n'ihu ọtụtụ nkwupụta ndị enwere ike ịme ka ọ dị irè site na ịmalite. Bido obere, nwalee obere obere, mụta nwayọ, wulite ngwa ngwa, ma mechaa mezuo nnukwu ebumnuche azụmaahịa na ebumnuche ego. Enwere ike ịla azụ oge na-adịghị anya - mana iji usoro nnwale na mmụta mụta, ọdịda aghọtara na-agụta ihe ma nzukọ a ga-enwetakwa mbugharị oge niile.
Ndị a bụ ndụmọdụ ole na ole iji hụ na mgbanwe mgbanwe dijitalụ na-aga nke ọma, nke oge ya na ntọala siri ike:
Mee ndumodu doro anya site na ndu. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ihe, nkwado si n'elu dị oke mkpa. Nyere ndị isi ụlọ ọrụ aka ịghọta na ọsọ na-enweghị atụmatụ anaghị arụpụta ihe. Usoro nyocha na mmụta ga-eme ka nzukọ ahụ nwee ihe mgbaru ọsọ ya chọrọ n'oge kachasị dị mkpirikpi ma nọgide na-eme ka ọhụụ ya dum sie ike.
Tinye ego na teknụzụ nkwado kwesịrị ekwesị. Akụkụ nke usoro mgbanwe dijitalụ na-aga nke ọma na-enwe ezigbo nchịkọta data na usoro njikwa, ngwá ọrụ iji mee ka nyocha na nhazi onwe onye, ​​na nchịkọta na ọgụgụ isi azụmahịa. Ekwesịrị iji nlezianya nyochaa nchịkọta ozi ahụ iji hụ na sistemu jikọtara ọnụ ma rụọ ọrụ ọnụ nke ọma. Okwu gbasara ịdị ọcha data na usoro ntuziaka siri ike bụ ọnyà ndị na-adabaghị na ngbanwe dijitalụ. Sistemụ kwesiri ịdị na-arụ ọrụ ma na-agbanwe agbanwe iji rụọ ọrụ na teknụzụ agbakwunyere ọhụrụ ka azụmaahịa na-agbanwe. Iji mezuo nke a, ndị mmekọ R2i na Adobe dị ka onyinye iji dozie ha iji kwado ibe ha na teknụzụ ndị ọzọ kachasị mma n'ime usoro ozi nke martech, na-ejikọ data sitere n'ọtụtụ ebe na ntanetị.
Ejula usoro ahụ. Na-etinye oge n'ime oge. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebili teknụzụ dijitalụ ha maka oge mbụ, nke pụtara na enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta n'otu oge. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịwakpo ntinye ego na obere akụkụ, na-achịkwa usoro ka ị na-aga. Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe nnukwu nrụgide ego, nke pụtara imekwu obere mmadụ. Na gburugburu ebe a, itinye ego na mbụ ga-elekwasị anya na akpaaka ka ndị ọrụ dịnụ wee lekwasị anya na ọrụ ndị bara uru. Site na ịtọlite ​​ụzọ ụzọ teknụzụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma n'ikpeazụ ịmezu ebumnuche ya.
Kpebisie ike na ị ga-enwe akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa ọnwa. Ka usoro wee rụọ ọrụ, a ga-enwerịrị nghọta banyere ihe a na-amụ na otu o si emetụta atụmatụ niile. Debe ebumnuche nke nzukọ gị na ndị isi ụlọ ọrụ na ndị otu egwuregwu dị mkpa kwa ọnwa ma ọ bụ kwa ọnwa, iji nye mmelite, mmuta, na nkwenye maka mgbanwe atụmatụ. Iji hụ na mmejuputa dị irè, ọ nwere ike ịbụ ihe amamihe ijigide onye mmekọ dijitalụ. Ọ bụrụ na COVID-19 egosila ihe ọ bụla, ọ bụ na atụmatụ dị arọ agaghịzi ekwe omume n'ihi na mgbe ihe ndị a na-atụghị anya ha ga-abịa, òtù dị iche iche ga-enwe ike ikpe ikpe ngwa ngwa ihe ga-akwụsị na ihe ga-agbanwe. Ndị mmekọ nwere ọkachamara na teknụzụ na atụmatụ nwere nghọta miri emi banyere otu ha abụọ si jikọọ. Ha nwere ike inye aka wepụta atụmatụ dị iche iche ga-adị irè ma baa uru ọnwa atọ, ọnwa isii, otu afọ, ọbụlagodi afọ atọ site ugbu a.
N’afọ gara aga ụwa agbanweela - ọ bụghị naanị n’ihi coronavirus. Atụmanya maka ahụmịhe dijitalụ agbanweela, ndị ahịa na-atụkwa anya otu ụdị nkasi obi na nkwado, ma ha na-azụ sọks ma ọ bụ gwongworo ciment. Agbanyeghị ụdị azụmaahịa, ụlọ ọrụ chọrọ karịa weebụsaịtị; ọ dị ha mkpa ịmata otu esi anakọta data ahịa, otu esi ejikọ data ahụ, na otu esi eji njikọ ndị ahụ iji nyefee ahụmịhe ndị ahịa nke onwe.
Na nchụso a, ọsọ na atụmatụ abụghị ihe mgbaru ọsọ abụọ. Companieslọ ọrụ ndị nwetara ya bụ ọ bụghị naanị na ha nabatara echiche nnwale-na-amụ kama ha tụkwasịrị obi na ndị mmekọ azụmaahịa ha na mpụga. Ndị otu ga-asọpụrụ onye ndu ha, yana ndị isi iji nye nkwado kwesịrị ekwesị. Afọ gara aga nọ na-ama aka ikwu obere - mana ọ bụrụ na otu dị iche iche agbakọta, ha ga-apụta site na njem mgbanwe dijitalụ ha siri ike, mara ihe, ma nwee njikọ karịa ndị ahịa ha karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Tags: adobeakpaakaCOVID-19nhicha datamgbanwe ntanetịmwekotaLeadershipmartech tojupụtaraakukoọhụụ ọhụụatụmatụTechnologynwalee ma mụta
Carter Hallett bụ onye na-azụ ahịa ahịa dijitalụ na ụlọ ọrụ dijitalụ mba R2ghariri. Carter na-eweta ahụmịhe afọ 14 + na nzụlite dị mma nke na-elekọta ma usoro ọdịnala ma nke dijitalụ. Ya na ndị ahịa B2B na B2C na-arụkọ ọrụ iji zụlite ntọala dị omimi, dozie nsogbu azụmaahịa ha, yana mepụta mmekọrịta miri emi na nke bara uru, na-elekwasị anya na ịkọ akụkọ okike, ahụmịhe ndị ahịa nke ogo 360, ọgbọ chọrọ, na nsonaazụ nwere atụ.